သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ Archives | Page2of2| ananda
မြန်မာနိုင်ငံ၏ 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာဖြစ်သော ananda (အနန္တ) သည် ယနေ့မှစ၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အစီအစဉ်သစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) အမှတ်တံဆိပ် စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော router ၊ mifi နှင့် ဒေတာအစီအစဉ်များကို အသစ်ပြင်ဆင်လိုက် သည့် ဈေးနှုန်းများဖြင့် သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက် ခြင်းသည်
12th အောက်တိုဘာ 2018
Wave Money နှင့် ငွေပေးချေပြီး ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာ နေထိုင်ကြပါစို့ ရန်ကုန်၊ ၁၀ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကကို ပြောင်းလဲပုံဖော်ပေးနိုင်သူ ananda (အနန္တ) နှင့် Wave Money တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ 4G+ အင်တာနက်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာနှင့် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပလန်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော Wave Money ဆိုင်များနှင့် Wave Money အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှတဆင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်နိုင်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော ယနေ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ananda (အနန္တ) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Alan Sinfield က “Wave Money ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် အားလုံးပါဝင်မှုအတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ထုတ်ကုန်တွေဟာ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်မှု (online shopping)၊ ငွေလွှဲပြောင်းမှု (money transfer)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကဏ္ဍပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု (digital services) စတာတွေကို ရိုးစင်း၊ လွယ်ကူ၊ မြန်ဆန်၊ စိတ်ချရစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်ကို ပေးစွမ်းပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်ပါတနာဖြစ်တဲ့ Wave Money နဲ့အတူ နောက်ထပ် ခြေတစ်လှမ်းဆက်တိုးသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုမိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရာ၌ ငွေသားသုံးစရာမလိုဘဲ ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ဆန်းသစ်မှုများကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် Wave Money ၏ ရည်မှန်းချက်ထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ “Wave Money နဲ့ ananda (အနန္တ) တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ခြင်းက တူညီတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင် ကူးပြောင်းရာမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ Wave Money ဟာ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အွန်လိုင်းကနေတဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေသူတွေ၊ တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းကုမ္ပဏီတွေ၊ ဘဏ်တွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ၊ အသစ်သစ်သော တီထွင်ဖန်တီးထားမှုတွေကို အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် အွန်လိုင်းကနေ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ananda (အနန္တ) လို နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမျိုးကို ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ထောက်ပံ့ ပေးခြင်းအားဖြင့် မျှတတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးတွင်အားလုံးပါဝင်မှုနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင် ကူးပြောင်းမှုရည်မှန်းချက်ကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု Wave Money ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Brad Jones မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Wave Money သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အောင်မြင်မှုများကိုရရှိနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Wave Money ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် အသုံးပြုသူဦးရေမှာ ၄ သန်းကျော်နှင့် အေးဂျင့်ပေါင်း ၃၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Wave Money သည် မြန်မာ့ဈေးကွက်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်ကာလမှစတင်၍ ၎င်း၏ ကြီးထွားတိုးတက်လာမှုသည် ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲများဖွင့်လှစ်နိုင်မှု၊ ATM စက်များ ထားရှိနိုင်မှုနှုန်းထားထက် များစွာကျော်လွန်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းတွင်ပင် Wave Money သည် ဝင်ငွေ ၁၂၃၅% နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပမာဏ ၂၇၆၅% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ananda (အနန္တ) သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း လိုက်အသုံးပြုသူများကို ထောက်ပံ့ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည်
10th အောက်တိုဘာ 2018
ထိန်ထိန်ညီးတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်မှာ ananda (အနန္တ) နဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစွာဖြတ်သန်းကြမယ်
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်တွင် hoco. ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေး။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကာလတွင် ananda (အနန္တ) မှ hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ပြည်သူလူထုနှင့် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အတွင်း ananda (အနန္တ) ၏ mifi သို့မဟုတ် router စက်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုကြသော ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ နားကြပ်၊ Headphone နှင့် Power Bank များပါဝင်သော hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၁၄ ခုထဲမှ တစ်ခုကို ကံစမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ “သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ဆိုတာ မြန်မာတွေအတွက် အရမ်းကိုအရေးပါတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့အခါသမယမှာ ananda (အနန္တ) က ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်ပြီး ခေတ်နဲ့အညီ ဖြတ်သန်း ချင်တဲ့ ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်” ဟု ananda (အနန္တ) ၏ Branding and Communications အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မဆုမြတ်နိုးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကံထူးရှင်များကို ananda (အနန္တ) လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကြေညာပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။ ananda (အနန္တ) သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း လိုက်အသုံးပြုသူများကို ထောက်ပံ့ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်၌ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သော ananda (အနန္တ) သည် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို မကြာမီကာလတွင် မန္တလေး၌ ဆက်လက် မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ # # # Amara Communications Co., Ltd အကြောင်း Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် telecommunications ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဦးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) ကို ACS မှ ပိုင်ဆိုင်ကာ လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် တစ်ဦးချင်း၊ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့လိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများကို ခံစားရ ရှိစေနိုင်မည့် 4G+ ဒေတာ အော်ပရေတာ (4G+ data-only operator) အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင် ရန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ananda (အနန္တ) သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော telecommunications ဈေးကွက်ကို ခြေလှမ်းအစပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော ACS အနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ တာဝါတိုင်၊ စွမ်းအင်၊ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည့် မိုဘိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ACS သည် ငွေဖြည့်ကတ် (top-up cards) များကို ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိသည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ACS သည် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်သော IGE လုပ်ငန်းစု၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက www.ananda.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။ မီဒီယာများ ဆက်သွယ်ရန် ငြိမ်းချမ်းသူ ဇင်မောင်ထွန်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချက်အချာကျသော ဈေးဝယ်စင်တာကြီးများတွင် ananda (အနန္တ) မှ အရောင်းဆိုင်များဖွင့်လှစ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဒေတာအော်ပရေတာဖြစ်သော ananda (အနန္တ) သည် ananda (အနန္တ) အမှတ်တံဆိပ် ဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်များကို ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားများ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့
6th အောက်တိုဘာ 2018
ananda (အနန္တ) မှ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့်တယ်လီကွန်မြုနီကေးရှင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Sinfield အား အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်
ananda (အနန္တ) သည် ဝါရင့်တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်း ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် Alan Sinfield ကို အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ယနေ့ခန့်အပ်ကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ Alan သည် ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ ananda (အနန္တ) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးကို တရား ဝင်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
11th ဇွန် 2018